Sawirka macaamiisha - Guangzhou Spring Package Co., Ltd.
Eeg dhammaan qaybaha
Alaabta iibka kulul
Sanduuqa saliidda lagama maarmaanka ah
sanduuqa hadh isha
Sanduuqa sanka lagu buufiyo
Baakadaha cuntada ee meesha laga saaray
Warqad aan dufan lahayn
Boorsada Baakadaha dabacsan
Bacda ziplock cuntada
Shandad warqad ah
Tuubo warqad ah
Laga bilaabo Apr 26, 2008, waxay ka qayb qaadatay NO.103 Canton Fair, wuxuu bilaabay xirfad ganacsi ganacsi shisheeye.
Ilaa May 20th, Waxay la kaashadeen macaamiishii ugu horreeyay ee ka yimid Uzbekistan, waxayna ka caawiyeen inay ku guuleystaan ​​gudaha sanduuqa cadayga iyo xirmooyinka kale, waxayna dhammeeyeen wax soo saarka goobta qurxinta.
Tan iyo Jan 8,2009 waxa aanu wada shaqayn la samaynay macmiilkayga Filibiin oo ku hadli kara wax yar oo Shiine ah, waxa uu sheegay in awoowgiis uu ka yimid Fujian, Shiinaha, wakhti horena, ay u soo haajireen Filibiin.Waxa aanu dhisnay xidhiidh adag wakhtigaas, sanad walba waxa uu iman jiray Canton Fair isaga iyo wiilashiisa, waxaanu la kulanay wiilkiisii ​​kala duwanaa, waxaanu ii keenay hadiyad gabadhayda.Sannadkii 2017, waxaan u aaday Filibiin safar shaqo, waxaa isoo wacay taleefoon isaga oo aan u socday Garoonka Diyaaradaha ee Indonesia.Weli saaxiibtinimo weyn xitaa ma aanan kulmin meeshaas.
Bishii Disembar, 21st, 2010, waxaan la kaashanay Macmiilka Algeria, Waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan qabto L/C, weli waxaan qabanay shaqo wanaagsan.
Bishii Nofeembar 30th, 2011, waxaan la kulannay macaamiisha Masar, waxay bilaabaan inay ganacsi sameeyaan.
Bishii Agoosto 17, 2012, waxaan la kaashanay Uruguay, South America.Intaa ka dib, waxa aanu ku kulanay Carwada Canton.
Bishii Sebtembar 14, 2012, waxaanu iskaashi la samaynay Columbia, waxaanu wax soo saar u samaynay Koonfurta Ameerika.
Bishii Sebtembar 26-keedii, 2012, waxa aanu wada shaqaynay macmiil ka yimid Benin.Tan iyo wakhtigaas, waxaan noqonnay saaxiib wanaagsan, markii gabadhiisa 14 jir ah, waxay u timid inay wax ka barato Guangzhou, Shiinaha.Waxaan ka caawiyaa inay gasho jaamacad, waayo wuxuu iga codsaday inaan gacanta ku dhigo gabadheeda.Inantiisa in badan ayaan caawiyay intii ay Shiinaha joogtay, si saaxiibtinimadeedu ay u noqoto mid wanaagsan, qoysaskiisa oo dhan aad bay ii jecel yihiin, waxaan xasuustaa markii ay gabadhu shil gashay, macalinkii jaamacadda ayaa isoo wacay, ka dib markii aan imid, naagtii booliiska ayaa igu gacan qaaday oo i waydiisay. xaqiijinta aqoonsigayga, iga codso inaan waco aabaheed oo aad isla markiiba aado Guangzhou, Shiinaha.2 maalmood ka dib, aabaheed wuxuu aaday Guangzhou, waxaan ka soo qaaday garoonka diyaaradaha, nin indhaha ka ilmeynaya, waxaan dareemay jacaylka gabadheeda.Ka dib markii uu yimid isbitaalka oo uu arkay gabadhiisa, waxaan arkay dhoola cadeynta wajigooda, gabadhu waxay noqotay qof miyir qaba, markaa aniga iyo macalinka oo dhan waan fududaynay, tan iyo markaas, waxay u duuleen Benin, wayna ku mahadsan yihiin caawintayada. Hadda way awoodi kartaa. ku hadal Chinese oo ka soo iibso alaab internet si aad ugu soo dirto bakhaarkayga.Waa saaxiibtinimo caalami ah oo weyn.
Oktoobar, 17th2012, waxaan la kaashanay macmiilka Ruushka, ka hor intaanan la kulmin, waxaan wada shaqaynaynay 3 sano, waxaan ku wada hadalnay khadka, mid walbana si fiican ayaan u fahmi karnaa , aad bay ii aaminsan yihiin, amarkii ayaa ahaa oo socday, ka dib markii ay arkeen Booqashada Guangzhou, Shiinaha, waxaan la kulannay kulan wanaagsan iyaga, waxayna ahayd markii iigu horeysay ee aan arko macmiilka weyn, dhammaanteen waan ku faraxsanahay inaan aad u yareyno oo aan u sameyneyno wax soo saar wanaagsan iyaga.2018, waxaan u imid Russia koobka aduunka ee kubbada dayrta, waxay iga caawisay inaan ballansado tareenka.
Dec 25th, 2012, waxaan la kaashanay macmiilkii ka yimid Mozambique, wuxuu yiri wadankiisu waa dhul qurux badan, iga codso inaan maalin ku booqdo halkaas, sidaas darteed wuxuu ii bandhigay sawirka si aan u arko, tani waxay sii kordhisay aragtidayda, jasiiradda Afrika ayaa ahayd. muuqaal wanaagsan.
Agoosto 4th, 2013, waxaan la kulannay macmiilka Kyrgyzstan, waxaan la bilownay isaga ilaa 2009, waxaan had iyo jeer ku hadalnay skype, laakiin waligeen lama kulmin, aniga si aan u sameeyo waxa uu rabo, waxaan ku dhammeyn doonaa dhammaan si habsami leh, ka dibna dhowr sano, wuxuu yimid Guangzhou, waxaanu la kulmay, aad u yaab badan in uu ahaa mid aad u yar oo u sheegay in uu leeyahay 4 caruur ah, aan aad ula yaabay waddankooda ragga oo guursada da'da hore.
Bishii Luulyo 15th, 2014, waxaan la kulannay macaamiisha ka yimid Ghana, oo ay bilaabaan in ay dhisaan xiriirka iskaashiga iyaga la, inkastoo kaliya aan la kulannay hal mar oo kaliya, dareenka qoto dheer ee aniga ii ahaa gabadhu waxay leedahay silsilad dahab ah oo qurux badan oo midab madow madow, iyo giraan weyn.
Janaayo 19th, 2015, waxaan la kaashaday macmiilka Guinea, wuxuu igu bilaabay meheradda isaga oo wax ku bartay Singapore.In kasta oo bilowgii hore, tiradu aanay ahayn mid weyn, haddana, ku adkaysta samaynta, waanu taageernay, ka dib markii uu jaamacadda ka baxay, waxa uu bilaabay ganacsigiisa. Hadda waxa aanu nahay iskaashi wanaagsan.
Bishii Luulyo 18th,2015, waxaan bilaabeynaa inaan la shaqeyno macaamiisha Bangladesh, waddanka Galbeedka Aasiya.Inta badan wuxuu igu kaftamay, waa xiriir wanaagsan.
May 4th, 2016, waxaan la kulannay macaamiisha Masar oo aan bilownay iskaashiga iyaga, Masar waxay ahayd waddan qani ah oo ku yaal Waqooyiga Afrika, waxay ku fiicnayd dalxiiska.Waxaan isku dayi doonaa inaan arko Ahraamta.
Bishii Maajo 18-keediith, 2016, waxaan la kulanay macmiilkeena wanaagsan oo ka yimid Uzbekistan oo ila shaqeynayey ilaa 2008. Masaafo dheer iyo saaxiib wanaagsan ayaa mar kale kulmay, waxaan muujineynaa dhoola cadeyntayada midba midka kale.
Apr 8th, 2017, waxaan la kulannay macaamiisha Kenya, waxay ahayd suuq wanaagsan oo halkii qani ku ah Bariga Afrika, weli, waxaan haysanay waddo dheer oo aan ku aadi karno suuqooda.
Jul 9th, 2017, waxaan ka qayb qaadanay bandhiga Las Vegas, USA, iyo xiriir wanaagsan.
Jul 9th, 2017, waxaan ka qayb qaadanay bandhigga Las Vegas, ee USA, bilaabay in aan iskaashi.
May 5th,2018.Waxaan la bilownaa macaamiisha Thailand oo aan la dhisno xiriir wanaagsan iyaga.
Agoosto 6th, 2018, waxaan la kulannay macaamiisha Peru oo aan bilownay inaan iskaashi sameyno.
Bishii Nofeembar 1st, 2018, waxaan la kulannay macaamiisha UK oo aan bilownay inaan la shaqeyno iyaga.
Bishii Disembar 10th, 2018 waxaan la kulanay macaamiisha ka yimid Russia, oo bilaabay xiriirka iskaashiga.
Jan 21th, 2019 waxaan la kulanay macaamiisha Dubai si aan u dhisno xiriirka iskaashiga.
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada iyo xigashada, fadlan noo soo dir e-mail, oo nala soo xidhiidh si fudud ama fariin noogu dhaaf mahadsanid.